Inoshamisa pfungwa ye iOS 10 iyo chero munhu angade | IPhone nhau
NeWWDC 2016 yatove kukona, vazhinji vedu tinorota nezvenhau dzekuti iOS 10 inogona kutisvitsa mushure megore umo kugadzikana uye mashandiro eIOS anofanirwa kuve aikosheswa nekambani, iine mashoma novelties chaizvo izvo chaizvo izvo chikonzero. Iyo inotevera vhezheni yeIOS inofanirwa (kana zvirinani inofanirwa) kuve hwaro hweizvo iOS inoda kuve mumakore mashoma anoteveraIye zvino Apple yatove neyakagadzirwa (iyo iPad Pro) iyo inoda kuve kutsiva palaptop. Iyo huru Viticci yeMacStories yakagadzira iyo iOS 10 pfungwa yekuti munhu wese anonyatso kusaina. Tinokuratidza pasi apa.
Mune iyo pfungwa isu tinogona kuona akati wandei anonakidza matsva, senge mukana wekugadzirisa zvakare iyo Center Center. Kugona kufamba, kubvisa uye kuwedzera mapfupi matsva kune aripo chimwe chinhu chakakoshesesa zvekuti hazvigone kufunga kuti parizvino Apple haisati yafunga nezvazvo. Iwo akapfuma mameseji, uyezve, Iyo faira inotsvaga zvinhu zvingabatsirawo vazhinji vedu vachiri kuona shanduko kuenda kuIpad kubva kulaptop yedu nekusahadzika kuti titange kuiona nemaziso akasiyana.
Vhidhiyo iyi inounza pamwe zvakawanda zvitsva izvo, kusiyana nedzimwe pfungwa dzatinogona kuwana paInternet zvakanyanya kushamisa asi zvisingaite, zvinogona kunge zviri mukati meinotevera sisitimu yekushandisa, nekuti hazvireve kuti kutyora chero mutsvuku mutsvuku uyo ​​Apple wakanyora , sekuwedzera mawadhiji ehupenyu kune anotenderera kana shanduko dzakakomba kukiya skrini. Musi waJune 13 tichaona izvo Apple zvavakatigadzirira iyo inotevera sisitimu yekushandisa iyo yatinoisa pane yedu iPhone ne iPad, pamwe neMac makomputa, Apple TV uye Apple Watch, mafambiro mana akavhurika ayo Apple inofanirwa kutarisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Inoshamisa iOS 10 pfungwa iyo chero munhu angade
Izvo zvinoshamisa here? Ummmm, vamwe vane ribhoni rakaderera ...